आजको राशिफल २०७८ असार ३१ गते बिहीबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ असार ३१ गते बिहीबार
असार ३१, २०७८ ०६:२४ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल आषाढ ३१ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई १५ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यउत्तरायण, ग्रीष्मऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढशुक्लपक्षको पञ्चमी तिथि विहान ५ः२६ बजेसम्म, त्यसपछि षष्ठी रहनेछ ।
मेष – स्वदेश तथा विदेशबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ । पुराना मित्रसँगको मिलनले प्रफुल्लित भइनेछ । शैक्षिक गतिविधिमा उन्नति हुनेछ । आर्थिक पक्ष मजबुत बन्नेछ । आफन्तजनसँगको रमाइलो पल वित्नेछ ।
वृष – पारिवारिक समस्या हल हुनेछ । खुसी बढ्नेछ । असहज परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ । मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल मिल्दा काम गर्ने हौसला थपिनेछ । सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ ।
मिथुन – नयाँ कार्यको थालनिले तनाब मात्र थपिनेछ, सतर्क रहनु होला । सान्दर्भिक कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन । शोकप्रद खबरले चिन्तित बनाउनेछ । आफ्ना लागि भन्दा अरुका काम व्यवहारमा समय खर्चनु पर्नेछ ।
कर्कट – आकस्मिक धन लाभको योग बनेको छ । पराक्रम बढेर जानेछ । धेरै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । परिश्रमको सही मूल्यांकन मिल्दा काम गर्ने जाँगर थपिनेछ । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
सिंह – धन संचय गर्न मन लाग्नेछ । अरु दिन भन्दा अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । सामान्य चुनौतिको सामना गर्नु परेता पनि अडिक भएर लागि पर्दा सफल भइनेछ ।सामजिक पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ । बोलिको कदर हुनेछ ।
कन्या – विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । टाढिएका आफन्तजनसँग मिलन हुनेछ । पूराना समस्याको समाधान रचिने छ भने नयाँ कार्य योजनाहरु बन्ने छन् ।सहमतिबाट समस्याको निराकरण हुनेछ ।
तुला – खर्च एवं परेशानीले छाड्ने छैन । टाढाको यात्रा त्यत्ति उपयुक्त देखिन्न । वैचारिक वेमेलका कारण विवादमा परिन सक्छ, बोली बचनमा सजक रहनु होला । अनावश्यक कार्यमा समय वित्ने देखिन्छ ।
बृश्चिक – विद्यार्थी वर्गका लागि अवसर मिल्नेछ भने, शैक्षिक गतिविधिमा समेत उन्नति हुनेछ । सुख सन्तोष मिल्नेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोतहरु जुट्ने छन् । व्यवसायबाट उचित रुपमा लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ ।
धनु – साझेदारी कार्यबाट उचित प्रकारको लाभ मिल्नेछ । कलात्मक कार्यमा विशेष चासो रहनेछ । कर्म क्षेत्रमा नयाँ अवसर मिल्नेछ । माया प्रेमको बन्धन कसिलो बन्नेछ । सुख सुविस्ताका साधनहरु जुट्ने छन् ।
मकर – व्यापार व्यवसायमा सुधार हुनेछ । सोचेका कार्यहरु एकाएक पूरा हुँदा खुसी लाग्नेछ । परोपकारी कार्यमा समय विताउन पाइनेछ । धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । सद्विचार आउनेछ ।
कुम्भ – गोपनियता बाहिरीँदा समस्यामा परिन सक्छ, संयम रहनु होला । अध्ययमा ह्रास आउनेछ । जिद्दिपनले गर्दा काम कार्य विग्रन सक्छ, मैत्री भाव राख्नुहोला । अनावश्यक कार्यमा भुल्दा गर्नैपर्ने कार्य भने अधुरै रहने छन् ।
मीन – अपरिचित व्यक्तिको सहयोगले कार्य बन्नेछन् । काम गर्ने कलाको प्रसंसाले उत्साह थपिनेछ । आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ । पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मेवारी मिल्नेछ ।